Saizvozvo, zvinenge zvose kofi tsika muEurope uye kumadokero nyika kunobva Italy. Ichi ndicho chikonzero nei ese akasiyana standard standard kofi yatinonwa tinawo mazita Italian.
Inowanikwa maminetsi mashoma kubva kuzvitima zveMilan muItari iyi Cafe inonyatsotsanangurwa nezita rayo. Makati ari kufamba achitenderera ino cafe inodziya iwe uchidya nekunwa. Iyi inonakidza cafe inonyanya kuzivikanwa nekunwa yakanakisa tii yakashandiswa mukati-yakavezwa mug uye kuva nemakeke anonaka. Tsvimbo vari nakisa ushamwari uye vakawanda katsi munogara vakarara, ndizvo zvavanotanga kuita.
Kana muchitsvaka kuona zviri kwazvo pamusoro Italian kofi, iyi ndiyo nzvimbo kushanyira. The siyana coffees uye richinaka mukaravhani nezvikafu zvishoma kuti ichi yakakurumbira kofi ruvara nokuda zvose revashanyi veko. Iyi inzvimbo huru musvusvure ikatengesa zvimwe coffees nokuda Euro zvichidzika. Ichi kofi chitoro chiri pawiricheya svikika, ane WiFi, ndizvo dzinovaraidza-ushamwari, uye ndaive ne doro rakazara doro. A-wemaminitsi famba kubva pachiteshi.
Bhuka rako rinotevera chitima rwendo uchishandisa Sevha Chitima uye ona akawanda zvitima zviteshi muItari.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcoffee-shops-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)